Wacaal Daray ah: Qarax Hadda ka Dhacay Xamar, Aagga Dekedda (dhegayso) – Radio Daljir
Wacaal Daray ah: Qarax Hadda ka Dhacay Xamar, Aagga Dekedda (dhegayso)
May 24, 2017 5:55 g 4
Xamar – Qarax gaari oo jugtiisa si xooggan looga maqlay qaar ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa ka dhacay nawaaxiga Dekada Magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, ayaa la sheegay in uu ka dhacay goob maqaaxi ah oo dad shacab ah ay ku sugnaayeen.
5 Qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jiraan hooyo iyo wiilkeeda, 6 kalena way ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa ka dhacay derbiga Dekada Magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen saraakiisha laamaha ammaanka.
Afhayeenka Maamulka Gobalka Banaadir, Cabdifatax Xalane, ayaa saxaafada uga warbixiyeey qaraxa iyo khasaraha uu geeystay.
Gudiga Gurmadka Abaaraha Heer Qaran oo Gurmad Horleh Ku Dhawaaqay (dhegayso)
Xafladda Qalinjabinta Jaamacadda PSU
Saamaali yaa ah yaa difaaci kara dalkaan dakiisii duminayo Allow sahal amuuraha
waxa aan layaabay sida deg degga ah ee wixii hadda dhacay daljir noohu soo gud biso allaylahe waan ku diirsannay . tel 7 386051